ဆေးရောင်စုံ ရှုမျှော်ခင်း အစီအစဉ်
355 June 2, 2015
ဆေးရောင်စုံ ရှုမျှော်ခင်း အစီအစဉ် တင်ဆက် – ညိုမာသက်၊ သူရစိုး တည်းဖြတ် – ညိုမာသက်
ဆေးရောင်စုံ ရှုမျော်ခင်း အစီအစဉ်
477 May 5, 2015
616 April 28, 2015
ဆေးရောင်စုံရှုမျော်ခင်း အစီအစဉ် တင်ဆက် – ညိုမာသက် ရိုက်ကူး – သူရစိုး၊ လင်းဆက်အောင် တည်းဖြတ် – ညိုမာသက်
617 April 21, 2015
ဆေးရောင်စုံရှုမျော်ခင်း အစီအစဉ် တင်ဆက် – ညိုမာသက် ရိုက်ကူး – ကိုမောင်၊ လင်းဆက်အောင် တည်းဖြတ် – ညိုမာသက်
ဆေးရောင်စုံ ရှုမျှော်ခင်း (၉ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၃)
628 April 2, 2015
ဆေးရောင်စုံ ရှုမျှော်ခင်း (၉ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၃) အနုပညာနဲ့ ပါက်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေနဲ့ အနုပညာရှင်တွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို အပတ်စဉ် တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ ဆေးရောင်စုံရှုမျှော်ခင်း အစီအစဉ် ဖြစ်ပါတယ်။ အခုတစ်ပတ်မှာတော့ – အစီအစဉ်မှာတော့ မြန်မာ့ရုပ်ရှင် အနုပညာဂုဏ်ရည်ဆုပေးအပ်ချီးမြှင့်ခံရတဲ့အနုပညာရှင် ၁၀ ဦးထဲက အကယ်ဒမီ တင်တင်နွဲ. အကြောင်း၊ အမျိုးသားကဇာတ်ရုံမှာကျင်းပနေတဲ့ ပြည်ထောင်စုမဟာမင်္ဂလာသဘင် လို.နာမယ်ပေးထားတဲ့ တိုင်းရင်းသားရိုးရာမင်္ဂလာအခမ်းအနားတွေသရုပ်ပြ တင်ဆက်ပွဲ အကြောင်း စင်ထရယ် ဟိုတယ်မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ စာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲ အကြောင်း တွေကို တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဆေးရောင်စုံ ရှုမျှော်ခင်း (၂၉ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၃)
439 April 2, 2015
စာပေ၊ ရုပ်ရှင်၊ ဂီတ၊ ပန်းချီ စတဲ့ အနုပညာအကြောင်းအရာတွေနဲ့ အနုပညာရှင်တွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှု အနုပညာရှင်တွေရဲ့ စကားသံတွေ ကို တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ၁။ ဗန်းမော်တင်အောင် ၃၅နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်ပွဲကို ရန်ကုန်မြို့ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်းမှာရှိတဲ့ ဟုမ်းခန်းမမှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်း ၂။ြဲ မန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးက ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ရံပုံငွေ ပေးအပ်တဲ့ အခမ်းအနား ၃။ ကိုလူချောအဖွဲ့က လူကြမ်းသရုပ်ဆောင် ကောင်းကျော်ရဲ့ စကားသံ နဲ့အတူ ၄။ တာမွေမြို့နယ် သန်တိသုခကျောင်းတိုက်မှာ ပီနန်ဆရာတော်ဘုရားကြီး က ဦးစီးကျင်းပတဲ့ မဟာဘုံကထိန်ပွဲတော် အကြောင်းတို့ကို တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရိုက်ကူး – ညိုမာသက် ၊ ဇော်ရန်နိုင် တည်းဖြတ် / တင်ဆက် – ညိုမာသက်
ဆေးရောင်စုံ ရှုမျှော်ခင်း (၁၉ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၃)
520 April 2, 2015
ဆေးရောင်စုံ ရှုမျှော်ခင်း (၁၉ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၃) ဒီတပတ် ဆေးရောင်စုံရှုမျှော်ခင်းအစီအစဉ် မှာတော့ အောက်တိုဘာလ ၂၂ရက်နေ့မှာ ကျင်းပပြုလုပ်မယ့် လူရွှင်တော် ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ၊လောကနတ် အက်ဂယ်လာရီ ခန်းမမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပန်းချီပြပွဲ၊ ဒါရိုက်တာ သြမောင်ကျော်က ရိုက်ကူးမှာဖြစ်ပြီး သရုပ်ဆောင် ရဲအောင် မေသင်ဇာဦး တို့နဲ့အတူ သရုပ်ဆောင်သစ်တွေဖြစ်တဲ့ မင်းသား ဟိန်းကိုကိုကျော် ကောင်းမြတ်ဟိန်း နဲ့ ရွှေသမီးတို့ ကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ လတစ်စင်း၏ ချစ်ခြင်းအလင်္ကာ ဗီဒီယိုဇာတ်ကား ကန်တော့ပွဲပေးအခမ်းအနားအကြောင်း နဲ. ဘေးရန်ဆီးကာဧရာဝတီဆိုတဲ့ မြစ်စောင့်ကဗျာစာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲနဲ.ကဗျာရွတ်ပွဲအကြောင်း တွေကိုတင်ဆက်ထားတာပါ။ ရိုက်ကူး – ညိုမာသက် ၊ ဇော်ရန်နိုင် တည်းဖြတ်/တင်ဆက်- ညိုမာသက်
ဆေးရောင်စုံ ရှုမျှော်ခင်း (၁၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၃)
549 April 2, 2015
ဆေးရောင်စုံ ရှုမျှော်ခင်း (၁၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၃) ရိုက်ကူး – ညိုမာသက် ၊ ဇော်ရန်နိုင် တည်းဖြတ်/တင်ဆက်- ညိုမာသက်
ဆေးရောင်စုံ ရှုမျှော်ခင်း (၁၂ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၃)
526 April 2, 2015
ဆေးရောင်စုံ ရှုမျှော်ခင်း (၁၂ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၃) ဒီအစီအစဉ်မှာဆိုရင် အနုပညာနဲ့ ပါက်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေနဲ့ အနုပညာရှင်တွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို အပတ်စဉ် တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ အခုတစ်ပတ်မှာတော့ – အနုပညာ ဂီတညီအမတွေ ဖြစ်တဲ့ အဆိုတော် မေရွက်ဝါ၊ လီလီနိုင်ကျော်၊ မီမီခိုင်မင်း တို့ ဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ INFINITY ART SISTER ENETERTAINMENT အဖွဲ့အကြောင်း၊ – ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ဇော ကွယ်လွန်ခြင်း၁နှစ်ပြည့်အထမ်းအမှတ်အဖြစ်ထုတ်ဝေတဲ့ စာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲ မှာ အမှတ်တရစကားပြောကြားတဲ့ ဆရာမောင်သာချို – ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ကျိုက်လတ်မြို့နယ်က ဒေသခံပြည်သူတွေကို အနပညာရှင်တွေက ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်မင်းသား နန်းဝင်း ၊ ရုပ်သေး အက နဲ့ ခြင်းအလှ – – မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးရံပုံငွေအတွက်ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ မြန်မာ့လက်ရွေးစင် – ဘောလုံးသမားဟောင်းများအသင်းနဲ. …Read more »